Ndị na-ekesa mmiri → •lọ akwụkwọ • Mahadum • Klọ akwụkwọ ọta akara • Warsaw
Ndị na-enye mmiri
UV oriọna oriọna maka nhicha mmiri
Maka ndị na-ese ihe
Need chọrọ onye na-enye mmiri na ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara ma ọ bụ mahadum? Companylọ ọrụ Water Point na-enye onyinye ndị na-abụghị mmiri cylinder, ndị na-akersụ mmanya, isi mmalite nke ndị isi ụwa na ụlọ akụ, nke anyị bụ ndị nkesa naanị na Poland.
N'oge na-adịbeghị anya, ịdị mma mmiri mmiri dị na Poland na-akawanye mma. Iwu Polish na iwu EU chọrọ idobe oke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. N'ọnọdụ obi abụọ ọ bụla, ọ ga - ekwe omume ịtụ nnwale nke ịdị mma nke mmiri na - asọpụta site na mgbata anyị na ọdụ ụlọ ọcha na ọrịa na-efe efe kacha nso.
Ọtụtụ mmadụ na-egosikwa na anyị nwere ahụ ike, nke pụtara na anyị na-eche karịa ihe anyị na-a drinkụ. A na-etinye ihe ọkụkụ na-edozi mmiri n'ọtụtụ ụlọ, ma ọ bụ nzacha na ndị na-enye mmiri.
Site na Septemba 1, 2015, ụlọ akwụkwọ niile machibidoro ire nri na-adịghị mma, gụnyere ihe ọ drinksụenedụ dị ụtọ. Agbanyeghị, ụlọ akwụkwọ nwere ọrụ inye ụmụ akwụkwọ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, nke bụ mmanya kacha mma maka ụmụ mmadụ.
Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ijide n'aka na, ọ bụghị naanị n'ụlọ, kamakwa na mpụga ya, ụmụaka na ndị nọ n'oge uto nwere ohere dị mfe iji nweta mmiri dị mma: dị mma, dị ọcha ma dị ụtọ.
Ekwenyere na ụmụaka nọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ mahadum kwesịrị ịnweta mmiri ọ drinkingụ constantụ mgbe niile ebe ha na-amụ ihe, ebe ha na-anọ ọtụtụ awa n'ụbọchị. Ka o kwesiri, mmiri a kwesiri ịbụ n'efu ma enwere ya. Companieslọ ọrụ na-emepụta mmiri ọ waterụ comeụ na-ebuso ọchịchọ ndị a agha. Enwere ike itinye ụdị ngwaọrụ ndị ahụ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'ụlọ akwụkwọ ọ bụla. Childrenmụaka na ndị na-eto eto nwere ike iji ha mgbe ọ bụla mkpa bilitere, ya bụ, n'oge ezumike na klaasị ma ọ bụ mgbe mmụta mmụta anụ ahụ. Accessnweta mmiri ọhụụ na mmiri na-atọ ụtọ ga-eme ka ahụ gị dị mma, ọ ga-emekwa ka ị mụta iri nri dị mma.
Ndị na-a waterụ mmiri, isi iyi na ụdị ndị na-a drinụ ihe ọ ,ụ ,ụ, nke a nwere ike itinye na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ebe kachasị adaba, na-eme ka ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ nwee mmiri dị mma ma na-atọ ụtọ.
Ekwesịrị itinye onye na-a waterụ mmiri ọ inụ inụ n'ebe dị mfe ịnweta: n'ime klaasị, na corridor, na ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ na ime ụlọ na-esote mgbatị ahụ, nke ga-eme ka ọ dịrị mfe ịnweta mmiri kachasị mma. Ngwá ọrụ ezubere maka ụlọ akwụkwọ nwere ihe nchekwa pụrụ iche iji gbochie ụmụaka itiwa mmiri.
N'iburu n'uche na isi mmalite mmiri iyi nwatakịrị kwesịrị ịbụ ezigbo mmiri dị mma, ndị na-enye mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na-emezu echiche a.
Onye na - eweta ihe ọgbara ọhụrụ na - a hụ na a na - enweta mmiri doro anya dị ọcha, ma belata ọnụego ịnye ụmụ akwụkwọ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. Uru ọzọ na-echekwa gburugburu ebe obibi.
Mmiri site na onye na-ere ihe dị na ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ mahadum nwere uto na ịdị mma pụrụ iche ma na-enye gị ohere ibute ụdị ndụ dị mma na ịkpụzi ị ofụ mmiri ọ andụ eatingụ na iri nri dị mma n'etiti ndị na-eto eto.
Ebe ụmụaka kwesiri ị drinkụ ihe dị ka lita mmiri mmiri kwa ụbọchị, ihe kachasị mma maka nke a bụ ịwụnye mmiri ọ drinkingụ inụ na ụlọ akwụkwọ ọ bụla, n'ọtụtụ ebe, ka mmiri wee nwee ike inweta ụmụ akwụkwọ niile.
mmiri anaghị akwụ ụgwọ n’ụlọ akwụkwọmmiri anaghị akwụ ụgwọ n’ụlọ akwụkwọnweta mmiri na ụlọ akwụkwọonye na-enye mmirionye na-enye mmiri ụlọ akwụkwọmmụtaisi iyi spa n'ụlọ akwụkwọndị na-a drinụ mmanya n'ụlọ akwụkwọndị na-a waterụ mmiri maka ụlọ akwụkwọmmiri maka ụmụaka n’ụlọ akwụkwọmmiri na mahadummmiri ụlọ akwụkwọmmiri pọmpụ n’ụlọ akwụkwọmmiri maka ụlọ akwụkwọmmiri ụsọ akwụkwọ
Hụ ụdị ndị ọzọ:
Ogige ntụrụndụ na ebe egwuregwu
Ihe ọha na eze
TEL.: +48 502 091 710 EMAIL: office@waterpoint.pl
Copyright Water Copyright Water 2020
Nzube na mmejuputa iwu: pixelsperfect.pl - weebụsaịtị Poznań